Indlu yelali yaseLa Aldaba ukusuka ekuqaleni kwenkulungwane yama-20
Indlu eyakhiwe ekuqaleni kwenkulungwane yama-20, ibuyiselwe ngeenkcukacha ezinkulu ngo-2005. Inezindlu zokulala ezi-3 ezimbini kunye nesithathu esinye, zonke zinegumbi lokuhlambela. Ukukwazi ukongeza abantu aba-2 ngaphezulu kwibhedi yesofa kunye nebhedi eyongezelelweyo. Ifakwe kwi-8 km ukusuka e-Oropesa (eToledo), i-26 km ukusuka kwingingqi yaseVera naseCandeleda, i-25 km ukusuka eTalavera de la Reina kunye neyure enesiqingatha ukusuka eMadrid, ngomgwaqo omkhulu.
Kubandakanya isidlo sakusasa esinembeko esihlala sibandakanya: ikofu, ijem kunye neepastries.
Silinde wena! ;)
Ekuqaleni, yayakhiwe njengekhaya losapho kunye nendlu yokusebenzela. Kwiminyaka eyalandelayo yaba luthethwano lwezonyango, indawo yaseFalange kunye nentolongo ngexesha leMfazwe yamakhaya yaseSpain. Ekugqibeleni yabuyela ekubeni likhaya losapho kwaye ukulungiswa kwayo kwaphuma ngo-2005.
Le ndlu ikwindawo yedolophu, ecaleni kwedama lokuqubha likamasipala kunye nevenkile yokutya. Ungayipakisha simahla kwisikwere esinye okanye kwindawo ezingqongileyo.
Idolophu ezolileyo kodwa ibekwe kakuhle kakhulu ukutyelela iindawo ezinomdla wabakhenkethi bengingqi ezifana nezi:
- Inqaba yeOropesa
- IMila yamanzi ePuente del Arzobispo
- Indawo ye-archaeological Dolmen de Azután
- Valdeverdeja zokusila amanzi kunye namaqula
- Isiza seVascos esinokutyelelwa
-Amadama eRosarito, eNavalcán, eCazalegas naseValdecañas
Undwendwe luya kuba nomnxeba woncedo weyure ezingama-24.